I-Auto Gas ne-LPG Plant Workshop - I-Marianogaservice Catania
I-Auto Gas ne-LPG Plant Workshop - I-Marianogaservice
Ukuthembeka nokuphepha ngamandla amakhulu.
4.9 /5 amavoti (amavoti angama-19)
Indawo yokusebenzela ama-elekthronikhi nge esebenzayo ngomshini ekukhonzeni kwakho imoto kagesi, Insikayethonga itholakala ku- Catania, lapho futhi eqhuba khona imisebenzi ye i-workshop ye-mechatronics, ukufakwa Izinhlelo ze-LPG e UMethane, Ukuzihlola ngokwakho kwikhompyutha.
I-Auto Gas ne-LPG Plant Workshop Marianogaservice: izimoto zakho ezandleni ezinhle eCatania
TheMarianogaservice auto ngogesi, a Catania, ihlome ngokuphelele Indawo yokusebenzela igesi yezimoto onendaba nokuphepha nokwethembeka kwakho izimoto. Ngalokhu uyinakekela nsuku zonke ngamathuluzi amahle kakhulu nangalo lonke ikhono labantu abanamakhono ngomshini. Ngaphezu kwazo zonke izinsizakalo ezijwayelekile ze Indawo yokusebenzela igesi ezenzakalelayo, iqembu le abasebenza ngogesi e ngomshini iyasebenza kuindawo yokusebenzela futhi yenzayo imisebenzi ye indawo yokusebenzela I-Mechatronics: okungukuthi, kuhlanganisa ukusebenza kahle kweziyalo ezinjenge umakhenikha, Theelectronics el 'informatics ngaleyo ndlela isebenzise futhi isebenzise ingxenye enkulu yenqubo yakho yokuhlaziya imoto. Futhi ngaleyo ndlela kuqinisekiswe ukuxilongwa okuhlala kunembile, kunembile futhi ngaphandle kokuvela kwephutha.
I-Auto Gas Workshop, izinhlelo zokuzihlola nge-computer kanye ne-LPG: okungcono kakhulu emotweni yakho
L'Ukulungiswa Kwezimoto di UMariano Ali inakekela isondlo futhiukufakwa di izitshalo I-GPL e i-methane. Iqembu lakhiwe ngamakhono abasebenza ngogesi e ngomshini ikwazi ukubona noma yikuphi ukonakala noma ukungasebenzi kahle kwakho ngejubane elikhulu nokunemba imoto, sibonga namathuluzi weukuzihlola ngokwakho ngekhompyutha. Futhi ngemuva kokubanakekela, bazokubuyisela okwakho imoto njengoNew. Isifaki esigunyaziwe sezinhlelo zegesi ze-BRC, UMariano Alì uphatha lesi sikhungo ku ukugcinwa kwemoto igesi iminyaka ngekhono elikhulu nekhono. L 'Isitolo sokulungisa izimoto empeleni, bekuqinisekisa isipiliyoni nobuchwepheshe obuphakeme iminyaka yonke kukho konke okuphathelene nosizo lwakho izimoto, kuhlanganiswe nezinsizakalo ze ukufakwa kwezinhlelo zegesi. Ukufuna 'ama-electronics yeminyaka bekuyiphuzu lokubonisa kulo Catania kulabo abafuna ukuphathisa okwabo imoto kube yiqiniso ama-electronics ochwepheshe, onekhono futhi ofanelekayo.
Ikheli: Nge-Lombardo, 6
Idolobha: ISan Gregorio yaseCatania
I-POSTAL CODE: 95027
Ucingo: 095 7175905
Umakhala ekhukhwini: 346 3206102
Ifasitela lesitolo: www.ubunyangalo.trovaweb.net
Inombolo ye-VAT: 05702950873